HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo u aragta Patrik Schick bedelka Erling Braut Haaland
March 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay weeraryahanka Bayer Leverkusen Patrik Schick bedelka suurtagalka ah ee Erling Braut Haaland ee Borussia Dortmund .
Kooxda reer Catalan ayaa loo maleynayaa inay si adag ugu jirto tartanka loogu jiro saxiixa Haaland xagaagan inkastoo ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka Norway lagu heli karo 67 milyan ginni sababtoo ah qandaraaska lagu burburin karo.
Si kastaba ha ahaatee, kooxo kale oo badan, oo ay ku jiraan Real Madrid , Paris Saint-Germain , Bayern Munich iyo Manchester City , ayaa sidoo kale u dagaallamaya sidii ay u heli lahaayeen weerarka dhexe ka hor ololaha 2022-23.
Sida laga soo xigtay Sport , Barcelona ayaa diyaarisay liis ay ku beddelan karaan Haaland waxayna u aqoonsadeen Schick mid suurtogal ah inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
26 jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Leverkusen intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo u saftay 24 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay 20 gool iyo seddex caawin.